Arabia Saodita: Avy indray ny orana ao Jeddah · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2018 8:39 GMT
Rahona be eny amin'ny lanitr'i Jeddah. Sary avy amin'ilay mpampiasa Flickr Ahmad Nawawi, ampiasaina amin'ny Creative Commons (CC BY-NC-SA 2.0)
Milaza ny tatitra fa farafaharatsiny 11 no maty, 100 no naratra ary mbola mikatona ny sekoly hatramin'ny 13 febroary. Maro ny faritra mbola tondra-drano, tsy misy fifandraisana amin'ny finday noho ny fahasimban'ny tilikambom-pifandraisan-davitra. Mitohy ihany koa ny fahaverezana ara-toekarena, noho ny fahaverezan'ny fidiram-bola avy amin'ny fizahan-tany ary ny fahasimbana ankapobeny amin'ny fananana sy ny filàna fotodrafitrasa maika.
Avy ao amin'ny Twitter:
Ny Saodiana eo amban'ny fitondran'ny firenena Saodiana dia tsy afaka mitantana ny fandraharahan'izy ireo manokana, na izany aza, raha afaka izy ireo dia hitondra izao tontolo izao miaraka amin'ny sivilizasiona sy ny harena.
Miresaka amin'i Jeddah:
#JeddahRain aza avela hisy olona hilaza aminao fa mendrika anao izany. Aza avela akory ny olona hilaza aminao fa mendrika anao izany
@AlwaleedKahled mitodika any amin'ny mpanjaka Saodiana:
Ry Abdullah-n'ny olombelona sy Sultan-ny hatsaram-panahy, misy ireo olona manodidina anao izay tia kolikoly loatra ka lasa mangalatra aminay. Sazio izy ireo azafady ary omeo ho an'ireo matanjaka azo itokisana ny fanahinay.
@khalooddy nanampy hoe:
Miankina amin'ny ady amin'ny kolikoly ny fiarovana ity firenena ity tsy hirodana ary mijery ny zon'ireo olom-pirenena, raha tsy izany, hiharan'ny Voalohany sy ny Faharoa ny firenena Saodiana Fahatelo.
@Zeerkh nisioka hoe:
Rahoviana ny ben'ny tanànan'i Jeddah no hialona ny ben'ny tanànan'ny indostrialin'i Aljubail?
@DrAbOaD manamarika hoe:
Tsy misy zavatra mahakivy kokoa noho ireo izay milaza fa efa nampitandrina anareo mialoha izahay, ary izy ireo no lehibe indrindra amin'ireo mpangalatra.
Fanehoan-kevitra bebe kokoa avy amin'ny bilaogy:
Crossroads Arabia nilaza hoe:
Angamba fotoana ho an'i Arabia Saodita izao mba hiala amin'ny ‘vao haingana kokoa!'haingna kokoa! tsara kokoa!-lehibe kokoa mandritra ny fotoana fohy ary mandany vola be amin'ny fanamafisana ny fotodrafitrasa, tsy ao Jeddah ihany, fa any amin'ny tanàna lehibe rehetra.
Khaled, avy ao amin'ny Khaled Rambles nanangona lahatsary ao amin'ny youtube izay azonao jerena ato.
Saudi Jeans nanampy hoe:
Miharihary, tsy nisy nianarana ny lesona tamin'ny taon-dasa. Vao mainka ratsy ny zava-misy, marobe ny fahaverezana aina sy fananana
ary Ibrahim Alsuhaibani nanoratra momba ny fifandraisantsika amin'ny orana:
Tsy ny orana no olana, ny fifandraisantsika aminy no olana.
@halmustafa namorona hashalbum, tamin'ny anarana hoe Jeddahrain.
Nampiasa media sosialy ny hafa mba hanavotana ireo mila fanavotana:
Zazalahy teo amin'ny 4 na 5 taona teo no mitomany sy tsy mety miteny, volo miloko mainty, 84 cm ny halavany, manao pataloha fohy maitso sy lobaka fotsy. Antsoy ny 0544477105 raha fantatrao izy.
ary avy amin'ny iray amin'ireo pejy fanavotana ao amin'ny Facebook:
Ilaina maika tokoa, mpanome fanampiana ara-pahasalamana avy amin'ny sehatry ny fitsaboana na mpitsabo mpanampy. Azafady antsoy raha afaka manampy ianao 0565418213
@fofetta_senpai For Anyone who walked in the floods You HAVE to take Tetanus vaccine Spread the World #JeddahRain
Ho an'ireo izay nandeha tamin'ny tondra-drano, TSY MAINTSY mitsindrona vakisiny Tetanosy ianao, ampitampitao #JeddahRain
Farany, nisy bilaogy natsangana amin'ny anarana hoe Jeddah Leaks, mba hampisehoana ireo nandray andraikitra tamin'ny kolikoly, izay miteraka faharavana goavana isaky ny mitondra orana ny lanitra.